नवलपरासी प्रहरीद्वारा अबैध मालसामान बरामद -
परासी, १२ साउन। पश्चिम नवलपरासीको बिभिन्न ठाउँबाट ९२ हजार मूल्य बराबरको अबैध मालसामान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सोमवार दिउँसो पाल्हिनन्दन गाउँपालिका वडा नं. २ भक्सिपुरमा नेपालबाट भारततर्फ अबैधरुपमा लग्दै गरेको ७० हजार मुल्य बराबरको १४ बोरा मटर (केराउ) र सोही समयमा भारतबाट नेपाल तर्फ अबैध रूपमा ल्याउदै गरेको १२ हजार मुल्य बराबरको १२ पिस लेडिज कुर्ता सुरूवाल प्रहरी चौकी महेशपुरले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
यसैगरी प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ भैरवपुरमा नेपालबाट भारकतर्फ लग्दै गरेको १० हजार मुल्य बराबरको ४ बोरा मटर (केराउ) सीमा प्रहरी चौकी बसहियाले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
उक्त नियन्त्रण गरिएको मालसामान साइकलमा राखेर लैजादै गर्दा प्रहरीलाई देखेपछि सामान फाली भागेका थिए ।
उक्त केराऊ र कपडा आवश्यक कारबाहीका लागी महेसपुर भन्सार कार्यालयमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सुचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक राजु लामाले जानकारी दिए ।
चालकहरूकाे अान्दाेलनका कारण बन्दरगाहमै थन्कियो मल
वीरगञ्ज, ४ असाेज । नेपाल आयात गर्न लागिएको मल वीरगंजकाे सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाहमा थन्किएको छ । नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले मङ्गलबारदेखि आन्दोलन गरेका कारण ढुवानी गर्न नसक्दा सो मल बन्दरगाहमै थन्किएको हो । ढुवानी हुन नसक्दा किसान चर्को मूल्यमा मल किन्न बाध्य छन् । भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएको ५० किलो तौलको युरिया मल […]
सिमामा सुरक्षाकर्मीको संयुक्त गस्ती
♦संजय कुशवाहा— परासी, २५ पौष । नवलपरासीमा सिमा सुरक्षाको लागी नेपाल र भारतीय सुरक्षा कर्मीको संयुक्त गस्ती गरिएको छ । शसस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोष्ट गुठी परसौनी र शसस्त्र सिमा बल एस.एस.बी.झुलनीपुर संयुक्त गस्ती गरेका थिए । शसस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोष्ट गुठी परसौनीका शसस्त्र प्रहरी निरिक्षक माधव पण्डितको नेतृवमा रहेको गस्ती टोली र शसस्त्र […]